io fahitàna tranga voamarina amin` ny fikasokasohana na « cas contact » io dia laharampahamena ho an` ireto tompon’andraikitra ireto. Efa hita ireo tranga voalohany saingy ho asa goavana miandry azy ireo no haminavina sy hamantantra ireo izay ahiana ho voan` ny aretina manoloana ny tsy fanajàn` ny vahoaka ny fepetra raisina amin` ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana. Ahoana, araka izany, no ahafahana mampihatra ireo toromarika indrindra manery ny mponina hanàja izany? Tsy lavina fa ny ankamaroan` ny mponina tokoa dia voatery mivoaka ny trano noho ny fitadiavana saingy tsy misy iray amin` izy ireo no manaja ny elanelana iray metatra. Misy mihitsy aza no mandray ny aretina ho kilalao ka aorian` ny 12 ora atoandro ihany vao mivoaka ny aretina, hono. Tsy mitsahatra ny mikaon-doha tanteraka ireo tompon’andraikitra mahefa satria sarotra ny fametrahana lamina sy ny fitsipi-pifehezana eto Madagasikara. Averina foana anefa fa ny tsy fanarahana an-tsakany sy an-davany ny toromarika no nampirongatra haingana be ny Coronavirus tany Italie, France, Espagne ary Etazonia.Dia efa iaraha-mahalala fa any amin’ireo firenena ireo no be maty indrindra ary mbola mitohy izany hatramin’izao, ny an’i Etazonia izao no henjana sy nampiorohoro indrindra satria 1200 no maty tao anatin’ny 24 ora ny faran’ny herinandro teo.Tsy mbola misy maty ny eto Madagasikara, ny mifanohitra amin’izay aza no nitranga satra efa nisy ny olona 2 sitrana.Azo resena tsar any Covid-19 raha manaja ny toromarika sy ny fandaminana ny rehetra, tsy misy fandresena azo moramora foana izany anefa !